Qaybaha bulldozer Shantui Dhamaan taxanaha sugaya iibka
Warshadda ayaa si toos ah u iibisa, tayo sare leh iyo qiimaha ugu fiican! Ku soo dhowow baaritaanka !!
XCMG Excavator qaybo dayactir iib ah! Asal ahaan, qiimaha ugu fiican!
MAYA. Nambarka Qaybta Magaca Xusuusin 1 805004799 bolt M36 × 330 Bol XCMG XG215CB qodayaasha 2 802138347 Muraayadda midig XCMG XG215CB qodista 3 802103361 Muraayada Skylight XCMG XG215CB qodista 4 802103362 Muraayadda gadaal gadaal galaaska XCMG XG215B 808
Qaybo ka mid ah XCMG Excavator for Sale
XCMG qodaya giraangiraha! Qaybaha asalka ah! Warshad si toos ah ayey wax u iibisaa!
Sanduuq ka mid ah XCMG qaybo dayactir asal ah oo loo dhoofiyo Malaysia !!
Waxaan mashquul nahay maanta. Waxaan diyaarinay sanduuq ka mid ah XCMG qaybo ka mid ah kuwii hore oo loogu talagalay in loo dhoofiyo Malaysia. Maya Moodal Mashiinka Nooca Nambarka Magaca Magaca 1 ZL30G YC6B125-T31 Yuchai mishiinka naaftada XCMG 860117273 filter shidaalka 2 ZL30G YC6B125-T31 Yuchai mashiinka naaftada XCMG 860115053 ...
XCMG qodayaal dayactir u sameeya Latin America !!!
Maanta, waxaan u dirnay XCMG qeybaha dayactirka Latin Amerika. Oo ay ku jiraan: 803504589WDKXGY200-30 kormeeraha elektarooniga ah 803547413KC08A901Z Condenser XE215D filter Diesel, iwm. Waxay u yihiin XE215 / XE370 / XE60CA / XE40
Farqiga udhaxeeya layliska iyo wadaha duugga ah kuma koobna oo kaliya tikniyoolajiyadda, laakiin sidoo kale faahfaahinta maalinlaha ah… Markaad la macaamilayso xaalado shaqo oo kala duwan, darawalada ruug cadaaga ahi waxay si fudud u xakamayn karaan khibradooda qani ku ah si loo hubiyo horumarka shaqada ee habsami u socodka, waana ka wanaagsan novic ...
Maxaa ku dhici doona warshadaha qodista Shiinaha ee soo koraya mustaqbalka?
Suuqa ayaa sii kordhaya. Tirakoob laga soo qaaday Qeybta Mashiinka Qodista ee Ururka Warshadaha Mashiinka Dhismaha ee Shiinaha ayaa muujinaya in bishii Janaayo-Febraayo 2020, iibka qodista guryaha ee Shiinaha uu hoos u dhacay sanadkii 46.5% sanadkii; si kastaba ha noqotee, suuqa ayaa si deg deg ah u joojiyay inuu dhaco oo ka soo kabtay M ...
XCMG XE65DA wuxuu noqdaa dookha koowaad ee adeegsadayaashu inay taajir ku noqdaan
Hal mashiin oo leh shaqooyin badan, is haysta oo dabacsan, raaxo lehna inuu ku shaqeeyo XCMG XE65DA Excavator Isla markii ay u shaac baxday dadweynaha, waxay noqotay doorashadii ugu horreysay ee isticmaaleyaal badan ay ku taajiraan! Goob dhisme oo ku taal Chuzhou, Anhui, Shan Jie, oo ah maamulaha iyo darawalka, waxay wateen nooc cusub oo ah 'XCMG XE65DA ex ...